Ulwa notywala urhulumente | News24
Ulwa notywala urhulumente
Inkulumbuso yePhondo uHellen Zille unikisa nge-bhegi kuNomakhaya Msiseni eTown Two.UmfanekisO: unathi obose
Abahlali base Town Two, eKhayelitsha bebedibene kwisikolweni samabanga aphakamileyo iThembelihle ngeCawe edlulileyo ukuza kuzimasa iphulo lokufundisa abantu ngobungozi botywala.
Abanye babantu ebebezimase lo msitho ibiyinkulumbuso yePhondo leNtshona Koloni uHelen Zille, usolodophu weSixeko saseKapa Dan Plato kunye nomphathiswa wezokhuseleko loluntu kwiNtshona Koloni uAlan Winde.
Emva kwalo msitho baye baphuma bangena esixekweni apho bebehamba benikisa ngee bhegi eluntwini.
Evula lomsitho uPatric Mngxunyeni nokwanguye noceba kuwadi 94 uchaze utywala njengesiselo esinobungozi nesikwangunobangela wengozi ezininzi ezithi zenzeke ekuhlaleni.
Uthe ulothulela umnqwazi eli phulo nanjengokuba lixhobisa uluntu jikelele.
“Siyakwamkela ungenelelo lwenkulumbuso yephondo kweli phulo. Ulwaphulo mthetho luphezulu kakhulu apha eKhayelitsha. Kangangokuba ne-cameras ezazifakiwe aziloncedo ngoba sikhuthuzwa ngoku zikhoyo ngoba azisebenzi,”uthsilo uMngxunyeni. Ukwakhuthaze uluntu ukuba lusebenzisane nabezokhuseleko ukulwa ubundlobongela ekuhlaleni.
Obethethela isikhululo samapolisa aseKhayelitsha nokwa yiCluster Commander uBrigadier Tania Hosking uziphikile izityholo zokuba ubundlobongela buphezulu eKhayelitsha ingakumbi eTown Two wongeza ngelithi bengamapolisa bayasebenzisana nabahlali.
“Eyona ngxaki engamandla esinayo ngabantu abathengisa utywala ngokungekho mthethweni kodwa nabo siyazama ukubanqanda kwaye siqwalasele namaxesha okuvala,” utshilo uHosking.
U- Plato uthe umnqweno wabo besiSixeko saseKapa kukwenza umahluko ekuhlaleni.
“Siliphondo leNtshona Koloni kunye nesixeko saseKapa asoze siphumelele sisodwa ngaphandle kwenxaso kunye nokubambisana noluntu lonke jikelele,” ucacise watsho uPlato. Woleke ngelithi ayiyoKhayelitsha yodwa esengxakini yezinga eliphezulu lokuselwa kotywala nezinye iingingqi ziyachaphazeleka.
“Iingxaki kunye nemilo emininzi iqala etywaleni,” ucacise watsho.
U-Zille ukhuthaze abantu ukuba basebenzise utywala ngendlela efanelekileyo bangaseli bagqithise. “Utywala buyichithile imizi emininzi kwaye buyagqugqisa nakwingingqi ezininzi. Abantu baphelelwa yimisebenzi ngenxa yosebenzisa utywala ngokugqithisileyo. Ukanti abanye bakwagaxeleka nasezingozini zendlela,” uthethe watsho Zille.
Here are the winning numbers for the PowerBall and PowerBall Plus draws for Tuesday, March 19 0 minutes ago Click here for the full list of lottery results